जब आफ्नो डेढ महिनाको बच्चा अँगालोमा च्या'पेर आमा रेल्वे ट्र्या’कमा ल’ म्प’ सार परेर सु'तिन् त्यसपछि जे भयो…. - Rising Dainik
April 8, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on जब आफ्नो डेढ महिनाको बच्चा अँगालोमा च्या’पेर आमा रेल्वे ट्र्या’कमा ल’ म्प’ सार परेर सु’तिन् त्यसपछि जे भयो….
नेपानगरमा सबैलाई स्त’ ब्ध बनाउने घ’टना घ’टेको छ । गोरखपुरबाट मुम्बई जाँदै गरेको काशी एक्सप्रेसको रेल बिहान ११:३० बजे स्टेशनमा आएर रोकेको थियो ।
त्यहाँबाट एक महिला ओर्लिन् र आफ्नो डेढ महिनाको बच्चा अँगालोमा राखेर सँगै जोडिएको रेल्वे ट्र्याकमा गएर सुतिन् । जुन ट्र्कमा करिब १०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा पुष्पक एक्सप्रेस आयो र उनीहरुको माथिबाट कु’ द्यो । तर, अचम्मको कुरा के भयो भने आमा र बच्चा दुवैलाई सामान्य चो’ टसम्म लागेन ।
तबसुम नाम गरेकी एक विवाहित २५ वर्षीया महिला इलाहावादबाट हजुरआमाको घर मुम्बई जाँदै थिइन् । तबसुमले बताए अनुसार उनकी सौतेनी आमाले उनकोे फेरि अर्को विवाहित पुरुष मो.साजिदसँग विवाह गराउन खोजेकी थिइन् ।
पहिलेको श्रीमानले उनलाई या’तना दिएपछि स’म्बन्धवि’च्छेद गरेर माइतमा बस्दै आएकी थिइन् तबसुम । र, ज’बरजस्ती विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्ने ष’ ड्य’ न्त्र थाहा पाएपछि आफू निकै त’ ना वमा रहेको उनले बताएकी छन् । तबसुमका अनुसार छोरा जन्मिनु भन्दा करिब दुई महिनाअघि उनले दे’हत्कोया’गको प्रयास पनि गरेकी थिइन् । तर, त्यतिबेला उनी बच्न सफल नै भइन् । हिले उनलाई सखी सेन्टरमा राखिएको छ ।
प’क्राउ परेकी दिपक मनाङ्गेकी श्रीमतीले प्रहरीलाई यस्तो बयान दिएपछि, मनाङ्गेलाई पनि प्रहरीले प’क्राउ गर्दै
गुल्मीमा ३ युवक घरमा छिरेर बुहारीलाई लिएर बे’पत्ता, सासु नजिकै मृ’ताअवस्थामा फे’ला परिन [ भिडियो सहित ]
February 22, 2021 February 22, 2021 Ramash Kunwar
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भेटेर महेश बस्नेतले रचे भयङ्कर ठूलो ष’डयन्त्र, अब के होला ?